Itoobiya: Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalidu ma ku guulaysan karaa ololaha dib u habaynta dhulka? | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya: Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalidu ma ku guulaysan karaa ololaha dib u...
Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa wacad ku maray inuu dhawaan bilaabi doono baaritaan baahsan oo ku aaddan dhul uu sheegay in si sharci-darra ah lagu boobay iyo guryo uu maamulku sheegay in boob lagu dhistay.
“Annagu qorshahayagu waxa weeye in nidaam sharci ah loo maro cabashooyinka dhulka la xiriira, annagoo iska kaashanayna Dowlad Deegaanka innaanu ka wadashaqeyno wixii sharci-darro ku baxay in qaab sharci ah haddana lagu soo celiyo.” ayuu yiri Dayib Muxumed, ku-xigeenka maayirka magaalada Jigjiga.
Previous articleMaayarka Berbera oo ka jawaabay eedo uga yimi dhiggiisa Burco
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo furay qorshe lagu hagi doono Garsoorka affarta sano ee soo socota